Ndithanda socializing nokuba nje kwabambalwa drinks, okanye meal kunye nabahlobo. Ndithanda ukuba bahambe kodwa haven t kwenzeka ukuba ngexesha. Ndiza iselwa esebenzayo nangona ukwenza ngathi kwi couch potato kunye elungileyo wefilim kwaye glass. Phantse gorgeous. Akukho mntu ugqibelele. Ndiza kuvula minded kwaye ndiza anomdla izinto ezininzi: Japan kuqala, umculo, cinema, iincwadi, restaurants, gardening, ekuphekeni, travelling. nkqu wam uyobhi. Ndithanda ekubeni fun. l m komhlaba, leyo yindlela ndiza kufumana kum yokubhala apha — hippie non-mainstream. Amagama angundoqo ingaba mhlawumbi softness, ukunxulumana, exchange, friendship: ndiza isebenza pastime apha kwaye kuba utshintsho icandelo lomboniso I. akunyanzelekanga ukuba ngathi highness akunyanzelekanga ukuba ngathi abantu abo babeka ngokwabo ngaphezu kwabanye. Ndifuna kukunika Rubel uthi: ukuba ufuna ukufumana phandle kangakanani ufuna kukunceda kakhulu, uza kuza emva kwaye kunika tshintsha. L. T. mna bonwabele ke phandle kuba a meal, horse riding, gardening, umculo, DIY, ukukhathalela wam izilwanyana, zobugcisa crafts, ufunda kwaye ndihamba kuba stroll kunye wam dog. Ndinguye uhlobo, considerate, bethembekile kwaye honest.
molo, lam ngu Josephine ndinguye sexy umfazi ukuqonda, sithande, esinenkathalo, romanticcomment, abathembekileyo, ndiyakholwa ekwenzeni umlingane wam ndonwabe. ngoko ke, yintoni endinokukwazi kuthi? Ndiza wamxelela ukuba ndinguye Omkhulu Elimnandi. Ndijonge kuba elide budlelwane kodwa ukuba mna ukufumana omnye umhlobo olungileyo, ngoko ke ukuba uza kuba ibhonasi kakhulu. Ndinako t kwaye andisayi settle kuba j. Mna hate le ndawo. kulungile, ndingumntu fun-sithande kubekho inkqubela, mna bathanda ukutya, umculo, iimifanekiso, iincwadi kwaye occasional marathon couch potation, mna uthando ubudala esikolweni uhlobo romance, uyazi. Ndibathanda ukufunda izinto ezintsha. Ikhangela wam soulmate, umhlobo, iqabane lakho, indoda. zonke kwindawo enye kuphela kuba mna yehova abahlala e-England kuba iminyaka kwaye esebenza ngoku. kodwa andinguye isifrentshi. kwaye imibuzo efana Molo, njani ingaba wena, h. Ndingumntu kubekho inkqubela othe elungileyo uluvo ukuthamba, uthando kwaye affection. Akunyanzelekanga ukuba kufuneka yakho engenanto amazwi, zonke ndidinga ukubona kuwe eneneni) zisekhona umntu ezingakwazi kuhlangana kunye nam kwaye nindivavanye ukuba ukho umntu. Okokuqala, nje ukuba vumelani uyazi ukuba wam s ulwimi isifrentshi ngoko ke ndizokwenza uxolo ukuba wam isixhosa ikhangeleka rudimentary. Ndiza yendalo, spontaneous, lively, ephumayo kwaye ngamandla. Ndibathanda ubomi baze baphile ngayo w. Abahlala e-France kwaye sithande oko, ndiya ngonaphakade umva UK ukuba yi uqiniseko hayi. Mna zithe wathi, ndiza uhlobo kwaye laugh kakhulu kwaye mna uthando ubomi. SVP lire end d tail, merci. Lovely kwaye uhlobo umbutho woomama, abahlala e-Paris. Ndithanda elide kuhamba kuyo indalo okanye kwi-beautiful ezitratweni of Paris. Ndibathanda dancing njenge andwebileyo ziphakathi wam Livingroom.
Mna ngokubhekiselele mot. Sele jikelele block, kodwa nangona kunjalo kukholelwa ngothando. Ndinako cook phezulu isichotho, sew a pair of curtains, sazi isityalo ukusuka kokhula, kwaye ngethemba kuba i umdla, nabafana kwaye esinenkathalo companion, ilungele tr. Ndingumntu ndonwabe kakhulu umntu. Mna uzalisekisiwe phupha lam ka-abahlala kwenye inkcubeko, kodwa umyeni wam wafa emva thina wathenga indlu apha kodwa phambi singathi yiya apha ngokusisigxina. Ndinguye apha yenza entsha ubomi. L. ezona zinto kuza amancinane impahla. Fun sithande kwaye esebenzayo. Mna bonwabele ekubeni ngaphandle gardening ehamba kunye ojikelezayo. Kusasa a hobby beekeeper kwaye uyakuthanda iziqhamo wam basebenza ngokunjalo zinika kude frit Ezininzi zephondo ibango ukuba abe free kodwa, betha, wena kunye surprise imirhumo emva kokuba ukungena. Ukuqhagamshela Icacile yi free Us dating nkonzo, kunye nayo yonke imisebenzi free kwaye akukho surprises. Oku kuthetha ukuba unako ukuthumela kwaye bafumana imiyalezo, Incoko, Umyalezo wangoku, Hetalia, kwaye Ngeposi kwi-zethu wild kodwa eyobuhlobo ngamazwe kwaye France dating Iiforam ngaphandle naziphi na iindleko, ngonaphakade. Akukho ikhadi lebhanki letyala luyafuneka. Akukho zindleko, Akukho amatyala, Akukho coupons, Akukho kidding. Kuhlangana entsha France omnye abahlobo namhlanje. Ukhe balingwe zonke iindlela zemveli ukufumana umntu othile kwi-France? Ingaba ukudinwa ye-France bar club icandelo lomboniso, afike ekhaya ongenanto indlu, lonely uluhlu lophinda-phindo enye ngexesha abo romanticcomment France restaurants, disastrous eyimfama imihla ukumisela isixhobo nge yakho matchmaking abahlobo, France wobulali icacile amaqela, icacile iziganeko kwaye iintlanganiso kunye akukho sizathu
← Bhalisa kwi-Dating site